Tababaraha Arsenal Oo Shaaca Ka Qaaday Qorshayaasha Suuqa Kala Iibsiga Bisha Janaayo
HomeSuuqa kala iibsigaTababaraha Arsenal oo shaaca ka qaaday qorshayaasha suuqa kala iibsiga bisha Janaayo
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa xaqiijiyay inuu si dhow ula shaqeynayo agaasimaha farsamada Edu iyadoo labadooda ay qorsheynayaan inay isbedel sameeyaan bisha Janaayo.
Kooxda ka dhisan Waqooyiga London ayaa haatan ku jirta meeshii ugu xumeyd ebid ee Premier League 10 kulan kadib, Gunners ayaa lala xiriiriyay dhowr ciyaartoy si ay u xalliso arrimahooda.
Kubadd sameeyaha Lyon Houssem Aouar iyo xiddiga Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai ayaa si aad ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan Waqooyiga London, halka kooxaha waa weyn ee Serie A, ciyaaryahanka khadka dhexe ee Inter Milan Christian Eriksen iyo ciyaaryahanka Norwich City Emiliano Buendia sidoo kale la sheegay inay yihiin saxiixi macquul ah bisha Janaayo.
Markii la weydiiyay suurta galnimada imaatinka iyo waxyaabaha ka soo bixi kara bisha soo socota inta lagu guda jiro shir jaraa’id, Arteta wuxuu yiri: “Waxaan qorsheyneynaa, kala hadalnay Edu iyo kooxda waxyaabaha aan qaban karno bisha Janaayo.
“Laakiin waqtigan la joogo waa arrin aad u adag, lama saadaalin karo iyo sidoo kale meelaha aan aad uga xaddidan nahay xilligan ayaa jira.
Waan arki doonaa waxa dhaca, waxaan u maleynayaa in wax walba ay u dhaqaaqi doonaan suuqa, waa la diyaarin doonaa, waxaan u baahanahay inaan sameyno wax aan ogaano xadidaada suuqaas bisha Janaayo iyo xaddidaadaha aan heysano iyo sidoo kale inaan lasoo saxiixano ciyaartoy. ”
Gunners ayaa sii xajisatay rikoorkeeda 100% ee Europa League ka dib guushii ay ka gaareen Rapid Vienna fiidnimadii Khamiista.